အလှူခံပုံးခိုးယူဖေါက်နေသည့်သူခိုးကို ဒုတ်ဖြင့်ဝင်ရောက် ရိုတ်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် အမျိုးသမီးအား ဆုငွေ ချီးမြှင့် - MM Live News
အလှူခံပုံးခိုးယူဖေါက်နေသည့်သူခိုးကို ဒုတ်ဖြင့်ဝင်ရောက် ရိုတ်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် အမျိုးသမီးအား ဆုငွေ ချီးမြှင့်
November 12, 2019 MM Live
စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ပါရမီရပ္ မဟာစည္းခုံႀကီး ဘုရား အလႉခံပုံးခိုးယူေဖါက္ေနသည့္သူခိုးကို ဒုတ္ျဖင့္ဝင္ေရာက္ ႐ိုတ္ႏွက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ ေန႔ေစာင့္ဝန္ထမ္းအမ်ိဳး သမီးအား စစ္ကိုင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႀကီးမွ ၉ . ၁၁ . ၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ ဆုေငြ က်ပ္ႏွစ္သိန္းကို ဆုခ် ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
စစ္ကိုင္းေက်ာက္မ်က္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္းႀကီးက ကြၽန္ေတာ္က စစ္ကိုင္းတဲႀကီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ပါတ္သတ္တဲ့ ကိစၥေတြကို တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း တက္ႏိုင္သည့္ဖက္က ေစတနာ သန္႔သန္႔နဲ႔ကူညီခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္း
ယခုလည္းဂုဏ္ျပဳထိုက္သူကိုဂုဏ္ျပတာျဖစ္ၿပီးတာဝန္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္သည့္ဝန္ထမ္းကိုခ်ီးျမႇင့္တာျဖစ္ၿပီးတရားဥပေဒစိုးမိုးေရအတြက္ကို ရည္႐ြယ္၍ စစ္ကိုင္းသားတေယာက္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္ၿပီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ပါတ္သတ္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၿမိဳ႕႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူမ်ားရွိပါက ယခုလို ကူညီေထာက္ပံ့ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းသို႔ဆက္သြယ္ေပးၾကပါရန္ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕သို႔ေျပာၾကားသည္။
Source : ေက်ာ္ထူး(စစ္ကိုင္း)
အလှူခံပုံးခိုးယူဖေါက်တဲ့သူခိုးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည့်အမျိုးသမီးကိုဆုငွေကျပ်နှစ်သိန်း ချီးမြှင့်
စစ်ကိုင်းမြို့ပါရမီရပ် မဟာစည်းခုံကြီး ဘုရား အလှူခံပုံးခိုးယူဖေါက်နေသည့်သူခိုးကို ဒုတ်ဖြင့်ဝင်ရောက် ရိုတ်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် နေ့စောင့်ဝန်ထမ်းအမျိုး သမီးအား စစ်ကိုင်းကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြီးမှ ၉ . ၁၁ . ၂၀၁၉ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ဆုငွေ ကျပ်နှစ်သိန်းကို ဆုချ ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
စစ်ကိုင်းကျောက်မျက်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်းကြီးက ကျွန်တော်က စစ်ကိုင်းတဲကြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ကိုင်းမြို့ ပါတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း တက်နိုင်သည့်ဖက်က စေတနာ သန့်သန့်နဲ့ကူညီခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း
ယခုလည်းဂုဏ်ပြုထိုက်သူကိုဂုဏ်ပြတာဖြစ်ပြီးတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်သည့်ဝန်ထမ်းကိုချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေအတွက်ကို ရည်ရွယ်၍ စစ်ကိုင်းသားတယောက်အဖြစ် ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး စစ်ကိုင်းမြို့နှင့်ပါတ်သတ်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတို့ကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူများရှိပါက ယခုလို ကူညီထောက်ပံ့ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး စစ်ကိုင်းကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းသို့ဆက်သွယ်ပေးကြပါရန် သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့သို့ပြောကြားသည်။
Source : ကျော်ထူး(စစ်ကိုင်း)
လတ်တလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ “ကိုရေ ဘာတွေလဲ” သီချင်းကို ပိုးစိုးပက်စက်ပြောချလိုက်တဲ့ ဉီးကောင်းကျော်
ထိုင်းလေဆိပ်မှ မြန်မာပြည်သို့အပြန်…ရန်ကုန်လေဆိပ်လဲရောက်ရော စိတ်မကောင်းစွာကြုံခဲ့ရသော ဥူးဇင်းလေးတစ်ပါး
ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး မြင်းမူမြို့နယ်တွင် ကားတိုက်သေဆုံး…